အင်းဂလိ တူ ဗားမား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Computers & Technology » အင်းဂလိ တူ ဗားမား	19
Posted by Anzartone on Jan 14, 2015 in Computers & Technology | 19 comments
ကခဂဃင – uc*Ci
စဆဇဈည – pqZpsn
တထဒဓန – wx'”e
ယရလဝသ – ,&v<o
ဟဠအ – [Vt
မြန်မာဗျည်း(၃၃)လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ – မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)
Gmail ထဲမှာ ပါတဲ့ Burmese to English ကို စမ်းကြည့်တာ။ ဒါက ပထမ စာမျက်နှာ။
ပထမ စာမျက်နှာ ဘာသာပြန်။
ဒုတိယ မြန်မာ စာမျက်နှာ။
ဒုတိယ ဘာသာပြန် စာမျက်နှာ။
တတိယ မြန်မာ စာမျက်နှာ။
တတိယ ဘာသာပြန် စာမျက်နှာ။
Gmail ထဲပါတဲ့ Burma- English ကို ကလိကြည့်​​တော့
​ရွှေပွဲလာ ပရိသတ်​​တွေရဲ့ နာမည်​က
မြစပဲရိုး says: ဗာဂျီးနီးယား ကြီး ရှင့်
ဒီမှာ Writing ရဲ့ ပို့စ်ကြီး နှစ်ခု ထပ်နေပါတယ် ရှင့်။
တလွဲ နာမည်တွေ က ပိုလှ သေးတော့။ lol:-))))))
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ဒယ်။
ဖုန်းနဲ့ ပုံတွေပါ တင်ရင်း ကလိကျိလိုက်ဒါ ..
ပို့စ်က နှစ်ဂု ထပ်သွားဒယ် …
သေချာ မကျိဘဲနဲ့ တလွဲနံမယ်တွေ လှဒယ် ပျောနဲ့အုံး အရီးရဲ့ …
နံဘတ် ၃၅ ကို ကျိကျိဘာလား ..
ကျော့် ယောက်ခမ ကိုများ စော်စော်ဂါးဂါး …..
Ma Ma says: ဖုံးနဲ့ဖတ်နေရလို့ စာတွေတလွဲဖြစ်ပြီး ဖတ်မရတာ၊
ကွန်ပြူတာနဲ့ဝင်တော့မှပဲ မောင်အံစာရဲ့တလွဲနဲ့ တွေ့သွားတော့တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: အီးဘင်း… တဲ့..
ဘာပဲပြောပြော.. ကျောက်တုံးကတော့.. ကျောက်တုံးပါပဲ..။ R..O..C…K …ရောခ့်…။
တကယ်တော့ ..ဒီနေ့က.. ဂိုဂယ်ဘာသာပြန်ဆားဗစ်မှာ…သမိုင်းမှတ်တိုင်ထူတဲ့နေ့..။
ABC News‎ – 13 hours ago
Google announced updates today to its translation app that allow users to simultaneously carry onaconversation in two different languages.
Mr. MarGa says: ဟုတ်ပ….
visual translation ကို offline သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ အတော်အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်….
အီးမေးထဲကစာလုံးတွေ ယူနီကုဒ်နဲ့ဆို ဘာသာပြန်တာ ဒီထက် နည်းနည်း ပို တိကျမလားလို့ တွေးနေမိတယ်။
ခင် ခ says: ၁၈။ ကိုခင်ခ 18.Before
ဒါမှ နောက်တစ်ခါဆို Before to ကိုခင်ခ ဖြစ်မှာလေ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: – (ခင်) ဆိုဒေါ့ ..
– သူက Before လို့ ကောက်ယူထည့်ပလိုက်တာ နေမှာ …
Before to ခင်ခ ဆိုယင်ဒေါ့ … အူဝဲ ဘဲ ဖြစ်မယ်ဗျ နော့ ….
Before says: အဲလို အူဝဲ ဆိုလဲ ဟိုသီချင်းထဲကလို အချစ်အတွက်တစ်ဖန်မွေးဖွားတယ် မှတ်ကွယ်။
kyeemite says: . All member ရေ လာကျိပါအုံး
manawphyulay says: ‘gqdk&if ;DwpfvJGtrnfrsm;udk toHk;Munfhygvm;
အခုလည်း အပေါ်က စာသားကို မြန်မာလို ပြန်ကြည့်တော့ ဗားမားအင်္ဂလိပ်စာ ရေးခဲ့ပြီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: နာဘန်းဘူးဖစ်တွားဘီလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
kyeemite says: .ဟီဟိ နာ့လောက်တောင်မတော်ဘူး..ရွာစားကျော် တောင်မပြန်တတ်ဝူး
.ရွာစားကျော်= village eat over (translated by Mike) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက် ကနေ…ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး Zoe ဖြစ်သွားတာဒုန်းးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 660
တညင်သား says: ကလိပြီးရင်လဲ ပြန်တော့လေ ဟိုမှာ နွားကျောင်းရအုံးမယ်…..
Kaung Kin Pyar says: ဘာသာပြန်ထားပုံတွေက မပြည့်စုံဝူး….
padonmar says: Of salt တဲ့ ဘယ်ကဆားပါလာပါလိမ့်။
ဂိုဂယ်ထရန်စလိပ်မှာ.. တီဒုံလို့ရိုက်ကြည့်တာ.. T Salt တဲ့..။
ဒုံက.. Salt လားဆိုတေ့ာလည်း.. ဒုံ=-Edom
အံ့ဖွယ်သုတ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: မနိုဗွီ သဂျားကို တျားစွဲဘာ
မနိုဗွီကို HIV တဲ့
အလင်းဆက် says: ဟုတ်တယ်…
နာ့ယောက်ခမကို အဲ့လိုတော့ …မလုပ်သင့်ဘူး..